Sida loo Beddelaan Spotify in MP3 Files -
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Spotify in MP3
Macquul ma tahay wax kasta oo ay u soo bixi music Spotify iyo si loogu badalo in MP3? Waxaan samayn karaa in la software wax lagu qoro (downloader music, taariikhqorihii music) ama waxaa jira nooc ka mid ah ripper gaar ah Spotify? --Jamison
Spotify, adeeg radio hoorto, waxay siisaa kuwa ku jecelna music la dhexdhexaad ah oo aan horay loo arag in la ogaado music cusub. Wixii Spotify caashaqi jiray, waxay u badan tahay in looga baahan yahay la mid ah sida Jamison. Waxay jeclaan lahaa in loogu badalo Spotify in MP3 si ay u dhagaystaan ​​iyagii u ciyaartoyda baabuur ama si toos ah offline computer, iyo xataa gubi Spotify MP3 beddelay CD-ururinta.
Nasiib wanaag, aad ku sugan tahay meel sax ah si aad u hesho dhowr qalab weyn (downloader music, taariikhqorihii music) talinayaa in la badalo Spotify in MP3. Mid ka mid ah waa desktop ah program-- Wondershare TunesGo , mid waa Addoon browser - Deezify iyo xalka kama dambaysta ah waa online service--Spoty-mp3.com.
Xalka 1: TunesGo Wondershare
Diinta Spotify in MP3 dhex TunesGo
Ka dib waa waxbarida fudud on qaab beddelidda in MP3 ka Spotify. Barnaamijku wuxuu (music downloader, taariikhqorihii music) waxaa uu u suuragelinayaa Gurtida hal, playlists, iyo sidoo kale radio inay la soo bixi. Oo xataa aad u fasaxaya in sidaas la sameeyo jadwal.
Tallaabada 1 Rakibaadda iyo ordaya Spotify in ay MP3 Converter
Si fudud guji xidhiidhinta ee kor ku xusan iyo inuu ka faa'ideysto download Spotify si MP3 Converter (music downloader, taariikhqorihii music). Inaad si degdeg ah u rakibi karo ayaa la soo bixi midig ka dib. Saaxir ayaa ku rakibi awood u siin doona habka a rakibo dhaqso badneyd iyo stress-free. Laga soo bilaabo rakibidda, furo software ayaa sheegay in ay u arkaan suuqa kala nadiif ah sida lagu muujiyey in aad xaq u leedahay.
Qaado aragto in barnaamijka la socda laba nooc, si aad u hubiso in ay doortaan doorashada haboon ee aad computer (Win & Mac). Labaduba waa la mid, si aan muujin doonaa sambal iyadoo la isticmaalayo version si gaar ah u Windows.
Tallaabada 2 bilow si loogu badalo Spotify in MP3 (record music)
Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in baadhno, oo ay maamulaan habayn Spotify ee aad dooneyso in aad loo siiyaa biraawsarkaaga la diiwaangeliyey. Tan waxaa la samayn karaa oo ag maraya galay interface ugu weyn ka dibna adiga oo riixaya / riixaya badhanka leh "taariikhqorihii" helay on bidix iyo qayb sare ee Spotify ee shaashada MP3 Converter.
Tani smart Spotify in MP3 qalab (music downloader, taariikhqorihii music) si toos ah u arko doonaa oo u qoraan audio ee habayn Spotify sida ugu dhakhsaha badan u bilaabo inuu ciyaaro dhex kaarka codka kombiyuutarka la isticmaalo. Hubi ma jiraan wax kale oo file maqal ah ciyaar in ay jiri doonaan codka la socda ma marka aad bilaabi qoro. Ka dib markii gabayadii Spotify waxaa loo sameeyaa, riix batoonka for "taariikhqorihii" mar kale, markan si loo soo afjaro geeddi-socodka lagu qoro. Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan codsigan waa in uu leeyahay feature si toos ah diinta songs Spotify in MP3 halka duubo la qabtay, sidaa darteed uma baahnid in aad tilmaamaya qaab wax soo saarka si ay u noqon MP3.
Tallaabada 3 Import badaley Spotify MP3 in Lugood
Waa mid aad u fudud in ay ku wareejin ka Spotify in Lugood. Ama xaq-riix Gurtida markaas dooran badhanka leh "Add to Lugood Library", ama doorato Gurtida ugu horeysay ka dibna riix badhanka leh "Add to Lugood". Laga soo bilaabo halkan aad horay u arki kartaa ka Gurtida Spotify ee playlist TunesGo ku Lugood. Hadda waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waa hesho iPhone, waxaa furaysto in, iyo hagaagsan MP3 Spotify ah.
In raadinaya aad MP3 files aad fayl deegaanka, si fudud u dooran habayn ah ka dibna riix icon ee folder laga helo qaybta hoose. Laga soo bilaabo halkan, si aad ciyaaryahan warbaahinta la dhaqaajin karo heli kartaa MP3 files iyada oo nuqul fudud iyo Jinka. Tani waa raaxadeeda waxa aad gaadhay!
Xalka 2: Deezify
Deezify waa waqti dheeraad ah loogu Chrome oo awood aad si loo badbaadiyo iyo badalo Spotify in MP3 si fudud. Waxay ku siisaa awood ay ku soo bixi music ka Spotify, Deezer, Madaxweyne Siilaanyo Music aan xad iyo xayeysiis.
Isticmaal Deezify soo bixi Spotify in MP3 waa mid aad u fudud. Dooro Tools> Extensions ka menu hoos-hoos on dhamaadka fog ee bar cinwaanka Chrome ah. Markaasuu u tag dukaanka Chrome Web iyo nooca in Deezify. Marka aad ka helaysaan, ku rakibi aad Chrome browser. Fur Spotify in browser iyo muusig aad jeceshahay, kadibna Deezify kaa caawin doona inaad hesho file MP3 ah. Just leeyihiin isku day ah.
Xalka 3: Spoty-mp3.com
Spoty-mp3.com waa adeeg internetka ah oo awood aad si loogu badalo Spotify in MP3 si fudud. Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee internetka iyo download music Spotify in MP3 files si fudud.
Waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan Spoty-mp3.com si loogu badalo songs Spotify in MP3. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay galaan website-ka iyo paste url ee music Spotify in ay sanduuqa banaan dhexe. Riix orange ah Search button iyo website-kan ku bilaaban doono si ay u falanqeeyaan url Spotify ah. Ka dib markii la falanqeeyo, waxa ay abuuri doonaan liiska song la Download button gabaygii kasta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad riix Download badhanka si aad u hesho music Spotify oo aan ka kaaftoomi.
Update: Spoty-mp3.com aan shaqaynayn dambe ay sabab u tahay server problem.If mar kale ka shaqeeya, mar walba oo aad updated doonaa.
Is barbar dhig ku 3 Tools Great in Download Spotify in MP3
Adeegga Type Software Desktop Addoon Browser Adeeg Online
Features Main Beddelaan Spotify music, playlists, raadiyaha, albums in MP3 files Download track wax ka Spotify Beddelaan Spotify playlists, albums iyo heeso galay mp3
Sifeey baxay Xayaysiis
Aqoonsadaan Song Info
Qorsheyso in Beddelaan
tayada wax khasaare ah;
Safe, si degdeg ah oo deggan;
Taageer dhammaan noocyada kala duwan ee internetka loo jecel yahay
ma u baahan yihiin si loo soo dajiyo barnaamijyada kombiyuutarrada
taageero dhammaan noocyada kala duwan ee internetka
oo aan xasillooneyn oo u baahan taageero Java
sheegay in ay virus by users
Chrome taageero kaliya
muuqaalada ma dheeraad ah
Garsooraha naftaada by in la doorto mid ka mid sax ah naftaada iyo waxa muhiimka ah waa in ay ugu dambeyntii ugu guuleystaan ​​si loogu badalo Spotify in MP3 files.